Nnwom 10 NA-TWI - Atemmu ho mpaebɔ - O Awurade, adɛn - Bible Gateway
Nnwom 9Nnwom 11
Nnwom 10 Nkwa Asem (NA-TWI)
10 O Awurade, adɛn nti na wowɔ akyirikyiri saa? Adɛn nti na wuhintaw wo ho mmere a yɛrehu amane? 2 Nnebɔneyɛfo yɛ ahantan na wɔtane mmɔborɔfo ani. Kyere wɔn wɔ wɔn mfiri a wɔasunsum mu. 3 Ɔdebɔneyɛfo ani gye ne bɔne ho; oniberefo dome Awurade na ɔpo no.